Isiphephelo Sesikhathi Sethu - Ukubalwa Kweqile KuMbuso
Ngabe kuzoba nama-refuge kulezi zikhathi? Ngabe bangokomoya noma bangokoqobo nje ngokomzimba amageja? Ingabe lokhu kuseMibhalweni noma Kwisiko Elingcwele?
UMark Mallett unikeza abafundi umhlahlandlela wama Katolika wokuthi isiphephelo sezikhathi zethu siyini, ungangena kanjani, kanye nombono ophilile okufanele siwulondoloze kulezi zinsuku ezingavamile. Funda Isiphephelo Sezikhathi zethu at IZwi Manje.
Posted in Okusuka Kwabahlinzeki Bethu, Imilayezo, Ukuvikelwa Ngokomoya, IZwi Manje, Isikhathi Sokubalekela.
← Umphikukristu… Ngaphambi kweNkathi ye…
UFatima kanye ne-Apocalypse →